मेष राशी: यदि युवतीको कुण्डलीको सातौं भावमा मेष राशी हुने गर्छ भने युवतीलाई धेरै भूमिको मालिक मिल्ने गर्छ। साथै अथाह सम्पती भएको श्रीमान पनि मिल्न सक्छ। समृद्धिशाली रहेको श्रीमान मिल्ने यस राशिका युवतीहरु आफ्नो वैवाहरिक जीवनमा सदा खुशी रहने गर्छन्।
वृष राशी: यदि युवतीको कुण्डलीको सातौं भावमा वृष राशी हुने गर्छ भने युवतीलाई समझदार पति मिल्ने गर्छ। साथै भनेको हरेक कुरा मान्ने पति मिल्ने कुरा ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। धनको मामलामा पनि यस प्रकारका युवतीहरुलाई राम्रै पति मिल्ने गर्छ।
वृष राशी: यदि युवतीको कुण्डलीको सातौं भावमा मिथुन राशी हुने गर्छ भने युवतीलाई चतुर व्यवसायी पति मिल्ने हुन्छ। व्यवसायमा चतुर हुनुको अर्थ सिधै धन–प्राप्तिसंग जोडिने हुन्छ। आर्थिक रुपमा मात्र नभई बुद्धिमानी रुपमा सम्पन्न भएको श्रीमान मिल्ने गर्छ मिथुन राशी भएका युवतीहरुलाई।
कर्कट राशी: यदि युवतीको कुण्डलीको सातौं भावमा कर्कट राशी हुने गर्छ भने युवतीलाई रंग–रूपको धनि मिल्ने सम्भावना अधिक रहने गर्छ। यसको अलावा राम्रो जागिर भएको पति मिल्ने समेत गर्छ। यस राशी हुने युवतीहरुलाई विशेषतः कलाकारितामा लागेको पति मिल्न सक्छ।
सिंह राशी: यदि युवतीको कुण्डलीको सातौं भावमा सिंह राशी हुने गर्छ भने युवतीलाई धेरै थरिका शिप भएको पति मिल्ने गर्छ। प्रविधिमा निपुण भएको पति मिल्ने हुँदा यस राशिका युवतीहरुलाई कहिले पनि आर्थिक रुपमा विमुख हुनु नपर्ने गर्छ। तर आफ्नै मर्जिको मालिक रहने हुँदा केहि बाधा भने झेल्नु पर्न सक्ला।
कन्या राशी: यदि युवतीको कुण्डलीको सातौं भावमा कन्या राशी हुने गर्छ भने युवतीलाई सुन्दर साथै गुणवान पति मिल्ने हुन्छ। यस राशिका युवतीहरुलाई धनको मामलामा केहि पछाडी रहेको पति मिलेता पनि विवाह पछि भने उन्नतिको लहर शुरु हुने गर्छ। (gnewsnepal.com बाट सभार)
के तपाइ नराम्रो सपनाबाट हैरान हुनुहुन्छ ? सिरानीमूनि राख्नुहोस् यी चीजहरु !!
दीर्घायुको लागि सहयोगी हुन सक्छ केही मिनेटको कडा व्यायाम : अध्ययन